Mpisolotena Tampisaka sy Sokajy : Ny Fampianarana Teny Anglisy Erantany · Global Voices teny Malagasy
Mpisolotena Tampisaka sy Sokajy : Ny Fampianarana Teny Anglisy Erantany
Nandika (fr) i Aurora Luongo
Voadika ny 11 Mey 2018 12:54 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, 繁體中文, Español, русский, Français, Italiano, čeština , English
Ramatoa iray mpampianatra, manoratra fehezanteny iray amin'ny teny anglisy eo amin'ny solaitrabe, manditra ny fotoana fampianarana anglisy. Kambodza. Sary: © Masaru Goto / Banque mondiale. CC BY-NC-ND 2.0
Raha tsy misy fanamarihana manokana, mitondra mankany aminà pejy amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy.
Ny 28 Martsa 2018 ity lahatsoratr'i Nicola Prentis nataony ho an'ny GlobalPost ity no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ary naverina navoaka etoana noho ny fifanekena fiarahamiasa misy amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Nandritra ny lesona voalohany, penina iray no tondroin'ilay profesora sady hoy izy : « It’s my pen » (« Peniko ity »). Mamerina daholo ny « It’s my pen » ireo mpianatra teny anglisy, izay avy amin'ny sokajin-taona rehetra, garabola hatramin'ny efa misotro ronono, ary avy amin'ny firenena erantany. Mandray penina iray an'ny iray amin'ireo mpianatra indray ilay mpampianatra no sady miteny hoe : « It’s her pen » (« Peniny ity »). Mamerina ny iray kilasy.
Taty aoriana kely, mba ho famerenana, nandray ny penin'ny mpianatra iray ilay mpampianatra ary nanasa mpianatra anankiray mba hanome azy ny valiny marina. Hoy ny mpianatra iray, « It’s his pen » (« Peniny iny [an-jazalahy] ») [mifanohitra amin'ny an'ny teny frantsay, ny mpamaritra tompon-javatra amin'ny teny anglisy [fr] dia mifanaraka amin'ny maha-lahy na maha-vavy ilay tompon-javatra, fa tsy ilay zavatra itompoana, izay sady tsy voafaritra ho lahy na vavy, fa mety amin'ny rehetra]. Misisika ingahy mpampianatra, miaraka amin'ny volomasony niakatra sy ny tsikiny feno fandrisihana, nanao hoe: « His pen? » (« PeniNy hoe ? an-jazalahy ? ») tamin'ny fanipihana ilay teny mba hanamarihana hadisoana sy, angamba, tamin'ny fanaovana fihetsika mitodika mankany amin'ilay ankizivavy tompon'ny penina voaresaka. Manitsy haingana ny hadisoany ilay mpianatra : « It’s her pen » (« Peniny iny [an-jazavavy] »).
Eto amin'izao tontolo izao, efa ho 1 lavitrisa ireo olona mianatra ny teny anglisy ho toy ny teny vahiny (English as a Foreign Language, EFL), ary dia samy mifanena aminà mpisolotena mandray roa daholo ao anatin'ny lesona voalohany atrehan-dry zareo. Teboka gramera lalovan'ireo vao miandoha izany. Mipoitra any amin'ny fanadinana natao ho an'ny ankizy ny fanazàrana ho fanarahamaso momba ireo fanavahana ny sokajy (lahy sa vavy) miaraka amin'ny fanontaniana toy ny hoe « Zazalahy sa zazavavy ny namana akaiky ny fonao indrindra ? » sy « Lehilahy sa vehivavy ny mpampianatra anao ? » Fa rehefa mitombo ny fahatsapàna ny hoe lahy sy vavy ary mipoitra indray ao anatin'ny fiteny ireo teny vaovao sy teboka vaovao momba ny gramera manodidina ny maha-izy ny tena, ireo mpampianatra EFL no tonga dia eny amin'ny lohalaharana mba hanindry ny fomba isainan'ireo olona iray lavitrisa erantany ny maha-lahy na maha-vavy an'izay teny izay.
Ao anatin'ilay fanazarana momba ny penina, misy fomba fototra roa hanovàna ny fomba fiasan'ilay mpisolotena tampisaka: mety ho azon'ny mpianatra iray mamaly ilay fanontaniana atao ny miteny hoe « It’s their pen » (« Peniny iny », « their » eto dia ampiasaina ho toy ny mpisolotena tampisaka tokana ary sady tsy lahy no tsy vavy). Na mety ho azon'ilay mpampianatra atao ny miteny ny sasany amin'ireo mpisolotena tampisaka sady tsy lahy no tsy vavy, mba hahafahan'ireo mpianatra manana safidy hafa eo am-pelantànan-dry zareo, ankoatra ny « his » sy « her », raha ilaina – toy ny nir, vis, eir, hir, zir, zir et xyr.
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana entina mampianatra amin'ny EFL dia ahitàna ny « they » , mpisolotena tampisaka sady tsy lahy no tsy vavy ary tokana efa hatry ny elabe. « Miresaka fitovian'ny lahy sy ny vavy ny rehetra any anaty antontan-kevitra any », hoy ny fanazavàn'i Frances Amrani, mpanolotsaina amin'ny fampianarana teny anglisy, mahatsiaro ny asany tamin'ny 2000 tao amin'ny Anjerimanontolo Fampianarana Asan-gazety ao Cambridge. « Namporisihana izahay hisaintsaina ny amin'izany teny izany any anatin'ireo tetikasa rehetra. Tamin'ny tetikasako voalohany, [bokikely mitondra lohateny hoe « Vantage »] ho an'ny Filankevitr'i Eoropa [….] nifanarahanay hoe ny « they » no mpisolotena tampisaka tsy lahy tsy vavy ary tokana niarahan'ny rehetra nampiasa, ary efa hatramin'ny taonjato [faha-14 na faha-15] ». Naiditra ho ao anatin'ireo fanazavàna fitsipipitenenana tany amin'ny faran'ilay boky natao ho an'ireo manana fari-pahalalàna antonontonony ny fehezanteny iray natao ho ohatra misy ny « they » manondro singa tokana,.
Kanefa, tsy azo antoka loatra hoe ho hita taratra anatin'ireo boky torolàlana atsy ho atsy ny fampiasàna ny « they » amin'ny endriny entina hanondroana samirery ny olona mihevitra ny tenany ho tsy anatin'ireo sokajy roa. Na mifototra amin'ireo fantina (angona ngezabe misy ireo fiteny araka ny ampiasàna azy), hisy foana ny fahasamihafàna eo amin'ireo boky torolàlan'ny EFL eo anelanelan'ny fotoana iverimberenan'ny zavatra iray mandra-pahalasa azy ho fenitra ho an'ny fanoratra sy fiteny, sy ny fotoana ipoiran'izany any anaty fandaharam-pampianarana. Manana izay ho teniny ihany koa momba izay voarakitra ireo mpanoratra sy mpanonta. « Raha lasa mahazatra ireo teny ka miely haingana ary misosa tsara ny fampiasàna azy, toy ny hoe « selfie », dia ho haingana be ny fampidirana sy fandraisana azy. Ireo hafa, izay fomba fiteny ho anà vondrona voafetra ihany, dia tsy isalasalàna fa hila fotoana maharitra vao ho tafiditra», hoy ny fanazavàn'ilay mpahay momba ny fiforonan'ny teny Julie Moore.
Raha raisina ny fotoana ilaina mba hamoahana boky torolàlana vaovao, midika izany fa raha kely indrindra dia taona vitsivitsy fanampiny no ilaina alohan'ny hanontàna anaty fitaovana fanabeazana ny hoe « This is Sarah’s pen, give it to them » (« Penin'i Sarah ity, omeo azy ny azy » ka eto ny « them » sady tsy lahy no tsy vavy ary tokana).
Angamba mety ho mihisatra no fahitàna an'izany, saingy eritrereto ny teny hoe « Ms. » [« Rtoa », izay tsy ijerena loatra ny toerana misy an'ilay vehivavy na tena manambady tokoa izy na tsia], izay nila teo amin'ny 70 taona teo vao tena lasa nampiasaina be tamin'ny 1972 ary azo raisina ho tsy nampidirina tanatin'ireo boky fianarana raha tsy efa tany afovoan'ny taona 80.
Eo am-pitetezana ireo tahirim-bokiny tranainy, ilay mpanoratra ny fomba fampianarana EFL, Scott Thornbury, dia manamafy fa tsy nahita na iray aza fanondroana ny « Ms » tao anatinà boky iray « Strategies » (Longman Publishing Co.) tamin'ny 1976, fa ohatra marobe ahitàna ny « Mrs » [« Rtoa»,kosa ho entina manondro vehivavy iray manambady, fanamarihan'ny mpandika] ary « Miss » (« Rtoakely»). Nefa, ny boky fampianarana, « Encounters » (Heinemann) tamin'ny 1979, dia manolotra ireo safidy ireo mba hamenoana antontan-taratasy ofisialy, isan'izany ny « Mr » (« Atoa. »), ary marihan'ilay boky natao ho an'ny mpampianatra fa:
Mariho ny fiavahan'ny « Miss/Mrs ». Raha manontany azy io ireo mpianatra, hazavao fa ny « Ms » dia fomba fiteny maoderina hanondroana ny Rtoakely sy ny Rtoa.
Tsy niandry ny mpianatra hametraka ny fanontaniana ilay boky Cambridge English Course Book 2 natao ho an'ny mpampianatra, navoaka tamin'ny 1985 :
Farano amin'ny fahazoanao antoka hoe hain'ny mpianatra ny fanampinanarana, ny anarana tamin'ny batemy, ny anaram-pianakaviana, ny « Mr, Mrs, Miss, Ms ».
Farany, tamin'ny 1986, nipoitra tany anaty boky Headway Intermediate natao ho an'ny mpianatra ny « Ms », tamin'ny fanolorana ny safidy« Ms », hilahatra amin'ny « Mr, Mrs, sy Miss » tao anatin'ny fanoratana taratasy ofisialy.
Afaka antenaintsika ve ny hahita firosoana toy izany hitranga haingankaingana kokoa amin'izao androntsika izao, miaraka amin'ny aterineto izay manaparitaka teny vaovao eran'izao tontolo izao sy any anatin'ireo angon-drakitry ny “corpus” na antontan-tsoratra ?
Mandeha malaky kokoa ireo mpanonta tsy miankina sasantsasany ary mifantoka amin'ireo filàna manokan'ireo mpianatra tsirairay. Sue Lyon-Jones, mpanoratra sady mpanonta ny fampianarana EFL ampitain-davitra, dia mitanisa ny fampiasàna tsy mitsahatra mitombo ny mpisolotena tampisaka tsy lahy tsy vavy ary tokana ho antony iray nifidianany hampiditra ny « they » tsy lahy tsy vavy ho anatin'ny lesona fitsipipitenenana ety anaty serasera. Saingy heveriny ihany koa fa ny « fampitaovana ireo mpianatra mianatra ny teny anglisy aminà voambolana mba hitenenan-dry ny momba azy ireo manokana sy ny maha-izy azy dia ampahany iray manandanja amin'ny asa[ny] ».
Izao koa, any an-dakilasin-dry zareo, manana fahafahana hampifanaraka ilay fitaovana novokarina sy ampiasainy ao an-dakilasy ireo mpampianatra, ary mba hampianatra izay heveriny ho mavesa-danja, tsy iandrasana ny fanamafisana avy amin'ny “corpus”. Ny mpisolotena tampisaka « they » tsy lahy tsy vavy, dia efa mipoitra sahady any an-dakilasin'ny EFL manerana izao tontolo izao.
Leigh Moss, izay efa nampianatra tany Vietnam sy Italia, dia mampiasa azy io any an-dakilasy. « Mampianatra ny « they » tsy lahy tsy vavy aho satria tsy fampiasa mahazatra loatra ny « xe/ze » ary manana namana tsy anatin'ireo sokajy roa ireo aho izay misafidy ny « they », dia tahaka izany no mety hampiasàko azy » hoy izy.
Miombona hevitra aminy i Jessie Fuller, profesoranà EFL ao Brezila. « Raha ny tena izy, ampiasaiko ho an'izay sady tsy lahy no tsy vavy ny « they », avy eo tsy nihevitra ny « ze » intsony aho raha tsy hoe misy mpianatra iray liana manokana amin'iny »
Mbola afaka mahita hevitra hatrany ireo mpampianatra mba hanolorana ilay teny amin'ny fomba tsy miteraka fifanjevoana. Ampianarin'izy ireo tsy tapaka ny momba ireo zavatra tsy mampino mihitsy hoe saro-takarina sy tsy voatery ho takatra ho azy amin'izao. Raiso ohatra ny fehezanteny : « How do you do? » (« Manahoana ianao ? ») Amin'ny ankapobeny dia ampianarina any amin'ny dingana voalohany io, na dia fanontaniana tsy dia azo lazaina loatra ho fanontaniana aza, ary tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny fomba fanaovanao zavatra, na inona na inona (« do » = manao). Tsy maintsy ampianarina arahana fanazavàna, na dia ho fohifohy ihany aza, ny fahasamihafàna kely ara-sosialy sy ara-kolontsaina mifamatotra aminy : Tsy fampiasa izy izy io raha tsy amin'ny olona izay sambany vao mba hitanao, ary anaty fifanakalozan-dresaka manaraka fahalalampomba ihany sy, amin'izao androntsika izao, angamba amin'ireo zokiolona na saranga ambony.
Ny mpisolotena tampisaka « they » ampiasaina hilazàna zavatra tokana, na ilay fotokevitra momba ny mpisolotena tsy lahy tsy vavy, dia toa tsy saro-takarina manao ahoana eo amin'ny sehatry ny teny raha oharina amin'ny « How do you do? » ary tsy dia sarotra loatra eo amin'ny sehatry ny fahatsapàna na kolontsaina raha miohatra amin'ny tsy fandraisana ny maha-manambady na tsia ny vehivavy rehefa miresaka aminy ny tena. Ary raha ny momba ny fahafantarana raha mila 70 taona na tsia ireo mpisolotena tampisaka tsy lahy tsy vavy mba hahazo toerana toy ny « Ms », ny fotoana no hilaza izany amintsika. Nefa izao, ny profesora izay mampianatra azy ireny dia manely azy mihoatra lavitra an'ireo olona 400 tapitrisa izay manana ny teny anglisy ho tenin-dreniny.